Nidaamka maaraynta tayada - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
XY Tower waxa loo balan qaaday in ay u soo gudbinayso macaamiisheena adeeg xirfad leh.Nidaamka maaraynta tayada waa mid ka mid ah siyaasadaha asaasiga ah ee XY Tower.Si loo shaqeeyo nidaamka maaraynta tayada, XY Tower waxay hubisaa in dhammaan agabka iyo tababbarka lagama maarmaanka ah la bixiyay dhammaan shaqaaluhuna ay door firfircoon ka qaataan hirgelinta Nidaamka Maareynta Tayada.
Taawarka XY, tayadu waa safar ee maaha meel loo socdo.Sidaa darteed, ujeeddadeennu waa in aan sii haysanno macaamiisheena anagoo soo saarnayna alaab tayo leh oo dhoobo ah, munaaradaha gudbinta, munaaradaha isgaadhsiinta, dhismeyaasha substation-ka iyo qalabka birta ee heerar tartan ah iyo hubinta bixinta wakhtiga.
Ahaanshaha qayb muhiim ah oo ka mid ah geeddi-socodka wax-soo-saarka, tayada waxaa loo hubiyaa sida waafaqsan heerarka ISO.Nidaamka Maareynta Tayada ee XY Tower waxa lagu shahaado siyay ISO 9001:2015, ISO14001, ISO451001, ISO1461.
Maamulka XY Tower waxaa ka go'an inuu dhinac kasta oo ganacsiga ka mid ah u shaqeeyo si waafaqsan heerarkaas bixiya adeegga ugu wanaagsan dhammaan macaamiisha.Tan waxaa taageeray habka maaraynta horumarka leh ee dhiirigeliya dhaqanka tayada leh ee shirkadda oo dhan.
Maamulka waxaa ka go'an horumarinta joogtada ah ee Maareynta Tayada.Tani waa si loo hubiyo in shirkadu ay si hufan oo hufan u shaqeyso oo ay buuxiso baahiyaha macaamiisheena.
QA/QC waxaa maamula kormeerayaal si fiican u tababaran kuwaas oo isticmaala qalabka tijaabada ee casriga ah si loo hubiyo tayada ugu sareysa iyo dhamaystirka wanaagsan.Waaxdan waxaa si toos ah u hogaaminaya agaasimaha guud.
Shaqada QA/QC waxay dammaanad qaadaysaa in dhammaan alaabta ceeriin ay u hoggaansamaan heerarka ISO ama qeexitaanka heerka macaamiisha ee loo baahan yahay.Hawlaha xakamaynta tayada waxay ka bilaabmaan alaabta ceeriin iyada oo loo marayo samaynta iyo galvanizing ilaa shixnadda kama dambaysta ah.Dhammaan hawlaha kormeerka waxa si sax ah loogu diiwaan gelin doonaa liiska hubinta ee warshadaynta.
QA/QC waa kaliya dariiqo lagu ilaaliyo tayada.Aasaaska dhaqanka tayada leh ee shirkadda oo dhan ayaa ka sii muhiimsan.Maamulka ayaa aaminsan in tayada alaabtu aysan ku xirneyn waaxda QA/QC, waxaa go'aamiya dhammaan shaqaalaha.Sidaa awgeed, dhammaan shaqaalaha ayaa lagu baraarujiyay sida ay uga go'an tahay maaraynta siyaasaddan gaar ahaan tayada guud ahaan waxaana lagu dhiirigelinayaa inay muujiyaan taageeradooda nidaamka iyagoo si firfircoon uga qayb qaadanaya.
Tijaabada xiisadda Tower
Tijaabada xiisadda Tower waa hab lagu ilaaliyo tayada, ujeedada imtixaanku waa in la dhiso nidaamka tijaabada xiisadda si loo hubiyo badbaadada tayada badeecada xiisadda soo gaartay isticmaalka caadiga ah ama isticmaalka habboon ee la filayo, dhaawaca iyo ku xadgudubka alaabta.
Qiimaynta badbaadada munaaradda birta waa qiimayn dhamaystiran oo lagu sameeyo badbaadada munaaradda birta iyada oo loo marayo baadhitaan, ogaansho, tijaabin, xisaabin iyo falanqayn iyadoo loo eegayo qeexida naqshadaynta hadda.Iyadoo loo marayo qiimeynta, waxaan ku ogaan karnaa isku xirnaanta daciifka ah waxaana muujin karnaa khataraha qarsoon, si loo qaado tallaabooyin u dhigma si loo hubiyo isticmaalka badbaadada munaaradda.